Kalsoonidda Nafta Waa Guusha Dhabta Ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ayaan daranaa qof liidaya nafsadiisa una arko wax aan qiimo lahayn, shaqsiyada xumo waxaa ugu liidata inaad nafsadaada liido weligaa nafsadaada halla barbar dhigin qof kale, kaliya isku day inaad sameyso sidda ugu wanaagsan ee aad awoodo. Ma is weydiisay haddii aadan nafsadaada ku kalsoonaan cidda kugu kalsoonaan karto? sow ma ogid in uusan jirin qof la dhashay howsha uu qabto, ruux walbo waxa uu dhashay asagoo waxbo aanan garaneyn, hawl walbo oo uu qabtay maalin ayuu eber ka joogay oo uusan waxbo ka fahansaneyn.
Ku kalsoonaanta nafta waa furaha lagu kaxeeyo gaariga guusha waana shardiga ugu muhiimsan ee guusha islamarkaana waa sharafka uu ku faano guuleyste walbo , taariikhda dadka guulahooda wax ka dhahay haddii aad dib u aqriso waxaa ka dhax arki doontaa kelmada ah ” Nafsadayda ayaan kalsooni buuxdo ku qabay ”
Inta aadan taariikh iyo tusaale dib u eegin intaad yara nasato nafsadaadana shir la qaadato ka fakar noloshaada iyo hawlihii ku soo maray kuwii aad ku guuleysatay iyo kuwii aad ku guul dareysatay intaba. Kalla saar nafsadaada hawl nolol maalmeedkaaga ka mid ah oo aad ku guulaysatay maxaa sabab uga dhigi lahayd guushaada? Waxaad ogataa howl aad ku kalsoontahay haddii aan qabato waxaa hubaal ah inaad guulaysanayso balse kawaran haddii aadan ku kalsooneen midaas waxaa hubaal u ah waxaadan ku kalsooneen inaadan ku guulaysani Karin. Haddiiba kalsoonaanta nafta tahay furaha guusha kalsooni daradana waa fashilka nolasha, ma jiro dhib ka weyn Inaad naftaada ku kalsoonaan weydo oo aad xumaan ama awood dari ku maleyso, waayo ma jirro doono ruux kugu kalsoonaado madamaa aad adigaba isku kalsoonaan weysay.
Ku kalsoonow nafsadaada hana ka cabsan in aad guul dareysato ama qalad kaa dhaco waayo ka cabsashada inuu qalad kaa dhaco waxa ay kugu qancin doontaa inaadan isku day samaynin waxaa ayna kaa dhigeysaa qof ka liito guuldareystaha, waayo guul dareystaha isku day ayuu sameyey xasuusnow in ruux walbo uu qalad ka dhaco ma gafe waa Alle ee haka wel-welin qalad inuu kaa dhaco Allena tallo saaro. Khaladka ugu weyn ee aynu galno waa in aan ku qanacno in aanan waxbo qaban karin ama anagoo guul daro ka baqeyno nafsadeena kasoo qaadno wax aan jirin kuna qancino in ay ogolaato guul daro tan ugu weyn oo ah quusasho iyo kalsooni daro nafsadeed. Ha noqon dooro biyo ku dhacday ee isku day inaad kaalintaada kasoo baxdo.
Maankana ku haay oo nafsadaada bar inaad keli tahay, guul ama guul darane aad adiga uun isu horseedi karto, iska illaw in ruux kale kalifi karo ama kuu soo hoyn karo guul ama guul daro, nafsadaada ku kalsoonow Alle oo keliyana kaalmo weydiiso.
Bar nafsadaada in aysan jirin wax aan macquul ahayn wax walbo oo qofi sameysay adigane albaabkeeda kaama xirna oo waad sameyn kartaa, balse waxaad u baahantay inaad u marto wadada ugu haboon isla markaana aadan ka baqin guul daro kana daalin isku dayga illaa aad ka guuleysato.
Kalsoonida ma ahan inaad wax walbo shab iska dhahdo iskuna furto howlo farabadan oo kala duwan hab aan nidaamsaneyn taas oo soo dadajin karta guul daro kugu abuurto niyad jab, wax walbo u qaabil hab nidaamsan oo taxadar ku dheehanyahay. Qofka nafsadiisa ku kalsoon waa kan kalla nidaamiya hawlisiisa isla markaan saaxiib u ah samir iyo dulqaad oo ah saadka iyo sahayda wadada guusha.
Ku kalsoonaaw naftaada. Waxwalbo oo dunidda yaallo waad qabani kartaa haddii aad Alle ka cabsiga kudarto…
Machadka Afkaarta Joogtada Ee Ganacsiga & Bulshada
Next post Tirada Dhimasha Xujeyda Ayaa Gaartay 717 Iyo 800 oo Dhaawac Ah
Previous post Masaajidka ugu weyn Ee Qaaradda Yurub ayaa laga furay Ruushka
Xidhiidhka Afkaarta iyo Bay’adda 9 views per day | by Bukhaari Xirsi Faarax